Ny siramamy vita amin'ny siramamy vita avy amin'ny Tianeptine (30123-17-2) - Phcoker
Ny vovo-sira siraptine sodiapaty dia fitambarana tricyclique, dia ny fanamorana sivana ny 5-HT (serotonin; sc-201146) famoahana amin'ny vitro ....
SKU: 30123-17-2 Sokajy: Weight Loss
Ny salt siretine Tianeptine dia manana fahaiza-manao tsy misy ifandraisany amin'ny olona izay manana fiantraikany amin'ny fiantraikan'ny fihetseham-po amin'ny fihetseham-po ny fahalalana ary manana fahafahana hanatsara ny fifantohana sy ny fifantohana amin'ny olona izay tsy dia mifantoka loatra.
Ny salt sodium Tianeptine dia manohitra ny ahiahy sy ny antidepressant ary ny toetra tsy misy fitiavan-tena.
Ny poety misy siraptine siraptine dia miara-miasa amin'ny ampahany maro amin'ny atidoha, anisan'izany ireo mpitsabo mpanimba, izay afaka mamorona ny vokatry ny euphoria. Ny fiantraikany hafa amin'ny hafanam-pandaminana dia ahitana ireto manaraka ireto:
Ny voka-dratsiny hafa dia ahitana ny zavatra toy ny fihenanam-po, ny eritreritra, ny fanahiana na ny toaka. Ny olana lehibe dia ahitana ny miala aorian'ny fampijaliana ary ny 0.1 - 0.3% ny mpampiasa dia hanana izany olana izany. Araka ny hitanao, ny vokatry ny sira Sitrine Tianaptine dia miankina amin'ny bio-chemistry tsirairay sy manokana.